Aung Win Hein (Noble): 04/13/12
ကောင်း သော စိတ်ခံစားမှု့ဖြစ်သည့်တည်ငြိမ်ခြင်း၊သာယာခြင်း၊ခံနိုင်ရည်
၂. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်မလပ်ငါသည်ငါ၏သဘောထားနှင့်အတွေး အခေါ် တို့ကို
အရသာကိုအပြည့်အ၀ခံစား၍ပျော်နေသောအချိန်တွင် မကောင်းသော အတွေးများမ၀င်ပါစေနှင့်။
၅. အိမ်ထောင်ရေးအတွင်းမှာလိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လျှင်အိမ်ထောင်ရေးအတွင်း မှာသာရှိပါစေ။
ပြဿနာထဲ ကရုန်းထွက်နိုင်ရန်အလွန်ပင်ခဲယဉ်း ကြောင်းအစဉ်သတိရှိရမည်။
တွေ့ ကရာလျှောက်လုပ် ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံးလက် နက်များပင်ဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်သဘော ပေါက်ရမည်ဖြစ်သည်။
၉. ရယူလိုသည်ထက် ပေးကမ်းလိုသော စိတ်သဘောထားပါ။
၁၀. အတ္တဆန်သောယှဉ်ပြိုင်မှု့မှ စည်းလုံးညီညာစွာဆောင်ရွက်လိုသောစိတ်မွေးမြူပါ။
၁၁. လိင်ကိစ္စအပေါ် လူမှု့ရေးပညတ်ချက်များကိုနားလည်ခံယူပြီး
ညင်သာခြင်း၊ ကရုဏာနှင့်အကြင်နာပိုခြင်းတို့ကို အစွမ်းသတ္တိအဖြစ်သဘောပိုက်နိုင်ပါစေ။
၁၄. အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင်အရှိကိုအရှိအတိုင်း လက်ခံလိုက်ဖက် အောင်နေတတ်ပါစေ။
၂၁. ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုရှိပြီး တိကျစွဲမြဲသောစည်းကမ်းကို
၂၃. ယခုဆိုသောအချိန်တိုင်းတွင်"သာသာယာယာ"ဖြစ်အောင် နေတတ်ပါစေ။
ဒေါက်တာအုန်းကျော်ရေးတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဆေးပညာမှ...စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by KO ZAW LATT
ကိုဇော်လတ် (မြတ်မွန်)တာချီလိတ်မြို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။